Golaha Sayniska iyo tignoolojiga Research of Turkey (TUBITAK) Xarunta Cilmi Technology Advanced Information Security IT iyo (wisemen) ku xiran Madaxweyne ku-xigeenka Maamulka Resource Enterprise for Research Support Waaxda Barnaamijyada at (ARDEB) in ay qaataan lacag [More ...]
Ogeysiis ay sameeyeen Agaasinka Guud ee Agaasinka Guud ee Degmadda Ankara ee Magaalo Weynta Magaaladda Ankara, laga bilaabo 1 Abriil, waxay ku shaqeynayeen waddo isku mid ah oo ay la Yimaadeen Gawaarida Gaarka loo leeyahay ee Gawaarida Gaarka loo leeyahay (ELV). [More ...]
Dabcan… Ma doonayno inaanu diidno booska Istanbul iyo muhiimadiisa. Gaar ahaan sannadihii la soo dhaafay, waxaan rabnaa inaan u leexsano isku dhowaanshaha Istanbul illaa ganacsiga, dalxiiska, dhacdooyinka sayniska, farshaxanka iyo dhaqanka, isboortiga si aan uga faa'iideysanno. Si kastaba ha noqotee… Maanta xaaladdu gebi ahaanba way ka duwan tahay. Si dhakhso ah dhexda [More ...]
Kordhinta waxqabadka ee gaadiidka dadweynaha inta ay la egtahay Qorshaha Ficillada Corona Virus, Degmada Eskişehir Caasimadda waxay uga digaysaa muwaadiniinta masaafada bulshada ee basaska iyo sidoo kale taraamyada. Deggeneyaasha dareenka leh ee Eskişehir ee ku habboon wicitaanka 'Gurigaaga Joog' [More ...]
Duqa Magaalada Gaziantep Fatma Şahin ayaa booqday halka ay kormeerayso adeegyada shaqaalaha ee laga soo galo aagga warshadaha abaabulan. Intii lagu gudajiray booqashada, oo uu goob joog ka ahaa Gudoomiyaha Gaziantep Davut Gül, booliska wuxuu kormeeray joogtaynta adeegyada iyo Booliska Magaalada. [More ...]
Faafidda dunida oo dhan ee coronavirus (Covidien-19) gudahood baaxadda basaska in tallaabooyin badan oo ka mid ah kuwa taabacsan Kocaeli degmada Metropolitan ulaşımpark Inc., oo dhan ay go'aansadeen in ay kordhiyaan wakhtiga adeegga baska hoos Turkiga duwan. Iyadoo la tixgalinayo caafimaadka rakaabkooda [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay kireysay hoteel iyo hool si ay shaqaalaha caafimaadku ula shaqeeyaan awoodooda oo dhan si ay u joojiyaan cudurka faafa ee loo yaqaan "coronavirus)" waxay ku nasan karaan xaalado ka wanaagsan oo ay sugi karaan caafimaadkooda. Saamaynta adduunka [More ...]
Iyadoo la raacayo dacwadda ka dhanka ah “EIA positive” go’aanka Kanal Istanbul, IMM waxay kaloo codsatay in la joojiyo fulinta fulinta wax ka badalida Qorshe Deegaanka Deegaanka Istanbul iyo in la joojiyo Deegaanka iyo Qorshaha. [More ...]
Isbedelo ayaa la sameeyay saacadaha shaqada ee farmasiiyada ku yaal Ankara. Farmasiiyada daafaha magaalada ayaa furmi doona 10:00, marka laga reebo maalinta Axadda, waxayna shaqeyn doonaan illaa 18:00. Marka la eego noocyada cusub ee muhiimadda coronavirus, Ankara waxay qiimeyneysaa dalabka ay sameysay Rugta Farmasiistayaasha ee Ankara. [More ...]
Shaqadii lagu kireyn lahaa aagag ganacsi oo kala duwan oo ka shaqeeya boosteejooyinka gadiidka tareenka ee Bursa oo loogu wareejinayo kaliye wadaha ah oo ay si wada jir ah ula shaqeeyaan mudada cusub ayaa dib loo dhigay! Ijaarashada Aagag Kala Duwan ee Rakaabka Rakaabka ee Bursaray in la qabto 30.03.2020 saacadu markay tahay 15:00 [More ...]
BURULAŞ wuxuu shaaca ka qaaday in isticmaalka shaqaalaha daryeelka caafimaad ee bilaashka ah ee gawaarida xamuulka dadweynaha ee maxalliga ah la kordhiyay illaa 31ka Meey 2020. Bayaanka uu soo saaray BURULAŞ, “Wareegtada Madaxtooyada, mid ka mid ah gaadiidka dadweynaha ee dhammaan shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee magaalada [More ...]
Duqa Magaalada Magaalada Izmir ee Magaalaweynta Tunç Soyer ayaa u mahadceliyay barayaasha toloobayda ee u sameeyay waji gabax caafimaad shaqaalaha daryeelka caafimaadka ayagoo u aaday Warshadaha Shaqada, iyo barayaasha baradhada iyo karinta wax soo saarta. Magaalaga Izmir [More ...]
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, ka dib shirkii Golaha Wasiirada ee Madaxweynaha, oo khudbad u jeedinayay umadda khudbaddiisa, wuxuu yiri "Waxaan taageeri doonnaa howlaha hal-abuurka leh ee dhammaan hay'adaha horumarinta ee dalkeenu ay ka qaban doonaan la-dagaallanka cudurkan" iyada oo loo marayo Kovid-19 [More ...]
Marka loo eego tirooyinka lagu shaaciyey websaydhka Wasaaradda Caafimaadka, warbixinta Coronavirus ee ku taariikhaysan 31.03.2020 waa sida soo socota: Guud ahaan, 92.403 baaritaan ayaa la sameeyay 13.531 xaaladood oo toganna waa la helay. Waxaa jira dhimashada 214 iyo 847 qof oo ku jira daryeel culus. [More ...]
Maanta, 1 Abriil 1933, 2134 milyan oo lira ah ayaa loo qoondeeyay dhismaha Wadada Afyonkarahisar-Antalya Railway. Si aad u soo jiidato xariiq laanta Elazig ilaa barta ku habboon ee khadka Fevzipaşa-Diyarbakır oo leh sharciga lambarada ah 25. [More ...]